Bit By Bit - Lamesa fiaraha-miasa - 5.5.5 Aoka etika
Ny fananarana ho etika mihatra amin'ny rehetra ny fikarohana voalaza ao amin'ity boky ity. Ankoatra ny olana amin'ny ankapobeny kokoa ny fitsipika noresahina tao amin'ny Toko faha-6-faobe manangana tetikasa fiaraha-miasa manokana ny sasany etika olana, ary satria faobe fiaraha-miasa no tena ny fiaraha-monina vaovao fikarohana, ireo olana ireo dia mety tsy ho tanteraka hita amin'ny voalohany.
Ao amin'ny fiaraha-miasa rehetra faobe tetikasa, olana ny onitra sy ny bola dia sarotra. Ohatra, ny olona sasany mihevitra fa unethical fa an'arivony ny olona niasa nandritra ny taona maro teo amin'ny Netflix Loka ary farany tsy nahazo onitra. Relatedly, izay heverin'ny sasany ho azy unethical ny handoa mpiasa amin'ny asa madinika asa tsena tena kely vola. Ny olana farany ny moa no nanoratra ny taratasy. Tetikasa hafa maka fomba samy hafa, fa ny sasany mpamorona tetikasa manome voninahitra rehetra mpikambana ao amin'ny fiaraha-miasa faobe; ohatra, ny farany mpanoratra ny voalohany taratasy Foldit dia "Foldit mpilalao" (Cooper et al. 2010) .
Open antso sy nizara fanangonana antontan'isa ihany koa dia afaka manangana fanontaniana sarotra momba ny fanekena sy ny fiainana manokana. Ohatra, Netflix namoaka sarimihetsika mpanjifa naoty ho an'ny rehetra. Na dia mety tsy naoty sarimihetsika toa saropady, dia afaka manambara fanazavana momba ny mpanjifa 'ny pôlitika na ny fironana ara-nofo, fa ny mpanjifa vaovao tsy manaiky hanao besinimaro. Netflix niezaka de-hamantatra ny tahirin-kevitra ka ny naoty tsy azo mifandray amin'ny misy manokana olona, ​​nefa vao herinandro taorian'ny famoahana ny Netflix angon-drakitra dia ampahany de-manafina anarana amin'ny Narayanan and Shmatikov (2008) (jereo ny Chapter 6). Ankoatra izany, ao amin'ny nizara fanangonana antontan'isa, mpikaroka afaka hanangona angon-drakitra momba ny olona tsy misy ny firaisan-kina. Ohatra, ao amin'ny Malawi Journals tetikasa, resaka momba ny lohahevitra saro-pady (SIDA) dia tsoratra raha tsy misy ny fanekena ny mpandray anjara. Tsy misy amin'ireo olana etika dia hay resena, fa tokony hodinihina ao amin'ny famolavolana dingana ny tetikasa. Tadidio fa ny "vahoaka" no mandrafitra ny olona.